Olee otú Naghachi iPhone Data mgbe iOS 6 Update Crash
> Resource> iOS> Olee otú iji weghachi iPhone Data mgbe iOS 6 Update Crash
Enwere m ike Weghachi My iPhone Data Lost mgbe iOS 6 Update Crash?
Otu enyi m na kpebiri imelite ya iPhone ka iOS 6 ụnyaahụ. Mmegolite fọrọ nke nta ịga nke ọma ma ọ jiri na ọgwụgwụ. Ọ bụ ihe a na-azụ ahịa, n'ihi ya, ọ bụ egwu na ọ pụrụ ịbụ furu efu niile emek na ekwentị kalenda. Ọ bụghị n'aka na ihe e kwadoo ka iTunes. ------- Shirley
Nke a bụ nanị otu n'ime ndị ọrụ na-okosobode iOS 6 update okuku nsogbu. Mgbe ha gara nke ọma emelitere iOS 6 on ha ngwaọrụ na ọgwụgwụ, ụfọdụ n'ime ha na-faịlụ niile ha na ekwentị luckily. Ma n'ụzọ dị mwute, e nwere ndị ka nnukwu ego nke ndị ọrụ furu efu faịlụ mgbe okuku, ha amaghị otú naghachi iPhone data mgbe update okuku.
N'eziokwu, dị ka ogologo oge dị ka e nwere iTunes ndabere na kọmputa, ha ka nwere ike weghachi iPhone data mgbe iOS 6 update. All ha mkpa bụ ihe iPhone Data Recovery Ngwá Ọrụ.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Mac iphone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) bụ ihe dị mfe ma dị irè ngwá ọrụ iji dozie nsogbu a. Site adịrị iTunes ndabere, ọ naputa faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ mfe: photos, kọntaktị, kalenda, na ndetu, ozi na ndị ọzọ.
Download ikpe mbipute dị ka ndị na, na gị faịlụ ga-azụ na nkeji.
Nzọụkwụ abụọ naghachi Data na Echefuola mgbe iOS 6 Upgrading Crash
Nzọụkwụ 1. nstall na ẹkedori usoro ihe omume, ị ga-ahụ ihe interface, nke na-agụnye niile iTunes ndabere nke iche iche na ngwaọrụ na PC gị. Họrọ ndabere nke ngwaọrụ gị na iti na Malite iṅomi bọtịnụ.
Nzọụkwụ 2. The scanning dịruru nanị ole na ole sekọnd. Dị ka ndị na image, ị pụrụ ịhụ faịlụ na nkwado ndabere na mpaghara egosipụta na dị iche iche ige, na ị na-enwe ike ihuchalu nkọwa nke ha site ịlele dị iche iche ige.
Ego ọ bụla faịlụ na ị chọrọ iji weghachi wee pịa Naghachi. Ị nwere ike ịzọpụta ha na kọmputa gị.
Ndi ana-akpo nkọwa:
Cheta na: Ebe ọ bụ na iTunes ndabere dị n'elu-e dere oge ọ bụla ị mekọrịta iOS ngwaọrụ iTunes, anyị na-egosi na ị na-adịghị mmekọrịta ngwaọrụ iTunes mgbe hụrụ data furu efu site na ngwaọrụ gị.